Barashada tooska ah - kulleejooyinka hore ee Colorado
CEC Hada Waxay Bixineysaa
Barasho buuxda-khadka tooska ah! Sida Loo Diiwaan Geliyo
Kulliyadaha Hore ee Colorado waxay ku faraxsan yihiin inay bixiyaan Waxbarasho toos ah oo khadka tooska ah ee ardayda Fasalada 6-12!
*Fadlan ogow in CEC loo oggolaaday iyada oo loo marayo jaartarrada dugsigeenna in lagu qoro tiro arday ah (gudaha iyo dibaddaba ee dugsiyadeena xarumaheennu ku yaallaan) barnaamijkeenna onleenka, iyadoo mudnaanta koowaad la siinayo diiwaangelinta marka ugu horreysa, marka hore -saqad u gaar ah.
Horeba Isqorisey? Tag bogga internetka ee Barnaamijka CEC Online!
Dulmar guud & Astaamo Muhiim ah
Barnaamijkeena CEC Online waa deeq si buuxda loogu helo ardayda fasalada 6aad -12 oo leh taageero isku mid ah oo weyn iyo barnaamij ku saleysan xirfadda ardaydeena kambuyuutarku waxay la kulmaan dugsigeena dhexe iyo xarumaha dugsiga sare.
Ardaydu waxay ku shaqeyn karaan xawaare ama xawaareyn, iyagoo kasbanaya labadaba a Dibloomada Dugsiga Sare oo ah Shahaadada Aasaasiga ah qalinjabinta - oo leh EBOLA KHARASHKA ardayda iyo qoysaska.
Barasho isku mid ah iyo isku mid ah si loo kordhiyo dabacsanaanta jadwalka, bixinta koorsooyinka iyo kaqeybgalka ardayda
Taageerada la kala saaray macallimiinta, la-taliyayaasha, iyo macallimiinta
Ardaydu waxay dooran karaan inay ugu yaraan ama xawaare sare ku socdaan si ay u dhammaystiraan fasallada
Khariidadaha maalinlaha ah ee loogu talagalay isdhexgalka bulshada, ujeeddooyinka dejinta, iyo fulinta fulinta
Laptop iyo taageerada internetka si meesha looga saaro caqabadaha teknolojiyadda
Waxqabadyada gobolka iyo naadiyada dalwaddii si ay u taageeraan danaha ardayda iyo inay bulshada la dhisaan ardayda fasalka la dhigata
Adeegyada ardayda ayaa la heli karaa
Marabtaa inaad hubiso in barashada tooska ah ee tooska ah ay tahay xulashada saxda ah ee qoyskaaga? Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad RSVP mid ka mid ah Barnaamijyadeena Internetka Kulamada Macluumaadka, ama, loogu talagalay Kulan Xog-warran ah oo lagu qorsheeyey Dugsiga Dhexe ee CEC ama Dugsiga Sare.
Fadlan la soco in u soo gudbinta RSVP Shirka Macluumaadka ee CEC aanu ku dhigaynin wax caqabad ah oo aad ku dalbato diiwaangelin. Kulamadaan waxaa loo diyaariyey inay ka caawiyaan qoysaska Colorado xulashada ikhtiyaarka ugu fiican ee suurtogalka ah ee waxbarashada ardaydooda.
KA DIGTOONA QOYSKA & ARDAYDA WAQTIGA WAQTIGA AH EE CEC!
Ma xiisaynaysaa waxbarashada tooska ah ee internetka sanad dugsiyeedka 2022-23? Anaga:
ARDAYDA DUGSIGA DHEXE CEC
Fadlan la xiriir Maamulahaaga.
ARDAYDA DUGSIGA SARE EE CEC HADDA
Fadlan la xiriir Lataliyaha Tacliinta ee ardaygaaga.
Su'aalaha Ugu Weyn ee Barashada Onlineka ah
Sidee loo baraa koorsooyinka?
Barnaamij buuxa oo khadka tooska ah ah, dhammaan koorsooyinka waxaa lagu baraa khadka tooska ah ee jawi isku mid ah oo ikhtiyaar ah, la duubay, fasallo toos ah oo toos ah oo dhacaya Isniinta, Arbacada iyo Jimcaha. Ardaydu waxay si joogto ah ula macaamili doonaan macallimiinta iyo shaqaalaha taageeridda wixii ka baxsan waqtiga loo qoondeeyey ee isku xidhka ah ee caawimaadda iyo taageerada dhammaystirka meelaynta. Ardaydu waxay dhammaystiraan koorsooyinka iyagoo soo bandhigaya xirfadaha shaqooyinka waxaana la siiyaa isku day badan
Koorsooyinka ma laga heli karaa labada Microsoft (PC) iyo Apple (Mac)?
Haa, barnaamijka OnFire / Spark LMS ee CEC ay adeegsato iyo dhammaan koorsooyinka kuleejka khadka tooska ah ee khadka tooska ah laga heli karo Windows ama IOS nidaamyada hawlgalka.
Ma jiraa arday Colorado ah oo iska qori kara barnaamijkaaga waxbarasho ee onlaynka ah?
CEC waxaa loo oggol yahay inay ardayda ka diiwaangeliso meel ka baxsan degmooyinka dugsiyadda ee xarumahayagu ku yaal. Si kastaba ha ahaatee, waxaan hadda ku xaddidanahay (10)* ardayda ka baxsan degmada mid kasta oo ka mid ah xeerka dugsiga ee CEC si loogu qoro Barnaamijkayaga Onlineka ah.
*Iyada oo ay sabab u tahay masiibada socota, dugsiyada CEC waxaa loo oggol yahay inay ugu adeegaan qaddar aan xadidnayn oo ardayda fog fog Barnaamijka Online-ka ah haddii sababta xulashada ikhtiyaarkan ay ugu wacan tahay welwel caafimaad oo ka badan Covid-19.
Ardaygu si buuxda khadka tooska ah ugama qeybqaadan karo isboortiga inta uu kaqorto CEC?
Haa! Ardayda CEC waxay kaqeyb qaadan karaan isboortiga iskuuladooda dhexe iyo kuwa sare iyagoo adeegsanaya CHSSA ama naadiyada madaxa banaan. Nidaamyada iyo habraacyada la xiriira ka-qaybgalka way ku kala duwanaan karaan dugsiyada. Waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto iskuulka kuugu dhow si aad wax badan uga barato.
Koorsooyinka dugsiga dhexe ma ku saleysan yihiin semester ama sannado-dheer?
Ardayda dugsiga dhexe waxay iska qori doonaan koorsooyinka sanadka oo dhan leh xulashooyin lagu dardar gelin karo. Koorsooyinka waa in lagu dhammaystiraa dhammaadka muddada.
Arday dugsiga dhexe ma qaadan karaa koorsooyin jaamacadeed?
Haa, ardayda fasalka sideedaad waxay qaadan karaan koorsooyinka kulleejka markii loo arko inay diyaar yihiin. Ardayda iyo qoysasku waxay u sheegi doonaan la-taliyahooda inay ogaadaan inay damacsanaayeen inay qaataan fasalo heer jaamacadeed ah; laga bilaabo waqtigaas lataliyaha-lataliyaha ayaa hubin doona in buundooyinka meelaynta ee ku habboon la gaadhay wuxuuna la xiriiri doonaa lammaanaha kulleejka si loo oggolaado.
Ardaygu runtii ma ku kasban karaa shahaadada la-hawlgalka barnaamijkaaga internetka oo buuxa?
Haa! Ardaydu waxay awoodaan inay marin u maraan dariiqooyinka shahaadada lammaanaha iyada oo loo marayo Barnaamijkeena CEC Online.
Ardayda khadka tooska ah ee 'CEC' ma ka qaybgalaan imtixaannada heerarka looga baahan yahay ee gobolka?
Haa, dhammaan ardayda waxay fursad u heli doonaan inay qaataan imtixaannada gobolka looga baahan yahay. Waalidiintu waxay xaq u leeyihiin inay “ka doortaan” ardaygooda imtixaanka gobolka.
Sidee u shaqeeyaa Barnaamijka Caawinta laptop-ka?
Dhammaan ardayda iyo qoysaska waxay mari doonaan baaritaanka tikniyoolajiyadda iyo doonnida si loo hubiyo inay jirto kalsoonida guriga ee ku aadidda nidaamkayaga. Ardayda u baahan laptop ayaa xaq u yeelan doona inay buuxiyaan foomka lacag bixinta iyo inay helaan qalabkooda.
Waxqabadyo ma heli doonaan ardayda ka baxsan koorsooyinkooda internetka?
Haa! CEC waxay ku bixin doontaa naadiyada sida dawlada ardayda, ciyaaraha isboortiga, kuwa guuleysta yar, iyo kuwa kale khadka tooska ah. CEC waxay sidoo kale si shaqsi ah u bixin doontaa dhacdooyinka gobolka si ay gacan uga geysato dhisidda dareenka bulshada ee ardayda fasalka la dhigata, kor u qaadka hanka dugsiga, iyo taageeridda wanaagga ardayda. Intaa waxaa sii dheer, ardaydu waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay ka qaybgalaan dhacdooyinka dugsiga iyo naadiyada shaqsi ahaan iyadoo loo marayo iskuulka diiwaangelinta ee CEC.
Sidee loola macaamilaa la xisaabtanka ardayda iyadoo la siinayo dabacsanaanta barashada internetka?
Ardayda waxaa lagula xisaabtamayaa inay dhameystiraan shaqadooda koorsada iyagoo:
- Ka shaqeynta hanaan waxbarasho oo la jaanqaadaya ama la dedejiyay oo ku hanuuninaysa inay dhammaystiraan koorsada.
- La kulanka macallimiintooda, la-taliyahooda, iyo macallimiin kuwaas oo si firfircoon ula xiriiri doona ardayda si ay u taageeraan una caawiyaan inay howsha ku sii hayaan.
Su'aalaha Maamulaheena Wax Barashada ee Internetka?